वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : September 2013
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ September 26, 2013
शुक्रबार बिहान एउटा टयाक्सीमा श्रद्धेय सरुभक्त दाइ, सहकर्मी मित्र शरण आँसु र कवि-पत्रकार फडिन्द्र अकिञ्चन चितवनतिर लाग्यौं। कविहरु सरस्वती 'प्रतीक्षा', सुरेश रानाभाट, दीपक समीप र प्रकाश ज्ञवाली र कलाकार गौतम बिजुक्छेसंग बिजुक्छेजीको गाडीमा हुनुहुन्थ्यो। दिऊँसो ३ बजेबाट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम शुरु भयो। 'चितवनका कवि र कविता'मा चितवनका ७८ कविहरुका संक्षिप्त परिचय र ४-४ कविता समेटिएको रहेछ। 'चरैवेति' को अंक ६ मा पनि तिनै कविताहरु संकलित रहेछन्। एउटा लामो र गहन प्रयासपछि संकलित स्वरुपमा निक्लिएका यी कविताहरुले निःसन्देह चितवनको कवितालाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने क्षमता राख्दछन् र चितवनका माध्यमबाट वर्तमान नेपाली कवितालाई नियाल्ने आँखीझ्याल पनि हो यो संग्रह।
कार्यक्रममा पोखराबाट पुगेका सबै (११ जना) र चितवनकै केहि कविहरुबाट कविता वाचन पनि भयो। त्यो रातको बास 'कविडाँडा' (कैलाशपुर?) मा रहेको एल बी क्षेत्री सरको घरमा भयो। एल बी सर र उहाँकी अर्धाङ्गिनीको आतिथ्यमा कवि र कविता मिसिएर निकै रमाईलो भयो। सुत्ने बेलामा साथीहरुले संरक्षण कविता यात्राका पूराना संस्करणका रमाईला संस्मरणहरु सुनाए। मेरो पहिलो सहभागिता, यसैले मसंग केहि संस्मरणहरु थिएनन्। राती सरुभक्त दाइ, एल बी क्षेत्री सर र अरु युवा कविहरुका बीच संरक्षण कविता आन्दोलनको दर्शन, यसको विगत र भविष्यका बारेमा कुराकानी हुँदै थियो धेरै बेरसम्म, अर्धनिद्रामा सुन्नेमा परें म।
न्यानो साहित्यिक आतिथ्यका लागि चितवनका साहित्यकार मित्रहरु, एल बी सर र जंगल सफारी लजलाई हार्दिक धन्यबाद! संरक्षण कविता आन्दोलनमा सहभागी हुने अवसरका लागि सरुभक्त दाइलाई हार्दिक धन्यबाद! साथीहरुले खिचेका तस्वीरहरु फेसबुकतिर छरिएका छन्। मैले भने अचेल कार्यक्रमहरुमा जाँदा क्यामेरा बोक्न छोडिदिएको छु। क्यामरा एक प्रकारको बोझ र बाधा लाग्न थालेको छ :) Posted by
तीन हप्ता भएछ यो आँगनमा गएल भएको, तपाईँहरुसंग गफ नगरेको।
क्याम्पसको इण्टरनेट उपकरणहरुलाई एक दिनको खतरनाक चट्याङ्गले ध्वस्त बनाईदियो र दुई हप्ताभन्दा बढी 'अन्धकार युग' मा बसियो। द्रुत निर्णयहरु हुने ठाऊँमा हो भने यस्ता समस्या भोलिपल्टै र बढीमा दुई दिनभित्र समाधान भईसक्थे। तर यो पर्यो 'पक्का' सरकारी क्याम्पस! यो एक्काईसौं शताब्दीको त्यस्तो 'इञ्जिनियरिङ्ग' क्याम्पस हो जहाँका हरेक निर्णयहरुमा हावी हुनेहरु उन्नाईसौं शताब्दीमा बाँच्छन्। अब उन्नाईसौं शताब्दीमा बाँच्नेहरुलाई एक्काईसौं शताब्दी भनेको दन्त्यकथा र फगत दन्त्यकथा हो। उन्नाईसौं शताब्दीमा बाँच्नेहरुलाई इ-मेल नभएर के, इण्टरनेट नभएर के? Posted by